Tany efitra Sahara: Fahagagana voajanahary sy hieroglifa miafina | Fitsangatsanganana tanteraka
Ny Efitr'i Sahara dia velaran-tany midadasika izay mipaka amin'ny Ranomasina Mena hatramin'ny Ranomasimbe Atlantika, milanja efa ho sivy tapitrisa kilometatra toradroa. Mandrakotra ny totalin'ny firenena folo amin'ireo izay Ejipta, Libya, Chad, Algeria, Morocco, Tonizia ary Maoritania.
Amin'io fanitarana io dia tsy tokony hahagaga raha izany ny efitra mafana indrindra eto an-tany ary izy io dia mirakitra ecoregions samy hafa, izay samy manana ny mampiavaka azy. Tsy misy ifandraisany amin'izany steppe sy savana ala any atsimon'i Sahara miaraka amin'ny tendrombohitra xerophilous an'ny Tibesti massif. Ary toy izany koa na ny teo aloha tsy nisy Tanezrouft, iray amin'ireo toerana faran'izay henjana indrindra eto an-tany. Noho izany, raha te hahalala bebe kokoa momba ny efitra Sahara goavambe ianao dia manasa anao hiaraka aminay amin'ny dia ataonay.
1 Inona no ho hita sy hatao any amin'ny tany efitra Sahara
1.1 Ny lemaka Ennedi
1.2 The Ahaggar massif
1.3 Ny lohasaha Mzab
1.4 Nouadhibou, fasana sambo ao amin'ny tany efitra Sahara
1.6 Erg Chebbi, ranomasina misy rahona
1.8 Ny Fezzan, ny faritra Libya any amin'ny tany efitra Sahara
1.9 Mount Uweinat, hieroglyphs miafina
2 Rahoviana no tsara kokoa ny mankany amin'ny tany efitra Sahara
3 Ahoana ny fomba hahatongavana any Sahara
Inona no ho hita sy hatao any amin'ny tany efitra Sahara
Misy faritra marobe amin'ny tany efitra Sahara izay tsy horesahinay aminao akory. Ny antony dia tena tsotra: toerana izy ireo Niriny fa ireo matihanina manam-pahaizana tena izy ihany izay mahalala tsara ny tsiambaratelon'ireo tany ireo no mankany aminy. Na izany aza, misy tranokala hafa azontsika tsidihina fitsangatsanganana voalamina ary hanaitra antsika amin'ny hatsaran-tarehiny isika. Hahafantatra ny sasany amin'izy ireo isika.
Ny lemaka Ennedi
Ity toerana tsy mampino ity dia miorina ao avaratra avaratry ny Tchad ary izy io dia heverina ho iray amin'ireo lavitra indrindra eto amin'ny planetantsika. Voahodidin'ny fasika amin'ny lafiny rehetra izy, dia misongadina noho ireo lohasaha sy lemaka mahavariana.
Lova eran-tany, niforona ny natiora tao Ennedi andohalambo lehibe sy andry. Anisan'ireo voalohany miavaka amin'izany ny aloba, izay mahatratra 120 metatra ny haavony ary 77 ny sakany. Ary mahaliana koa ireo Arches dimy, izay, araka ny anarany, dia mamorona karazana andohalambo mandresy misy vava dimy, ary ny Arch ny elefanta, izay mitovy amin'ny vatan'ny pachyderm ary na ny maso eo amin'ny tapany ambony aza.
Toy ny hoe tsy ampy izany rehetra izany, tao amin'ity toerana tsy dia tia mandray olona ity no hitan'izy ireo sary hoso-doko izay mampiseho fa nonenana izy io nandritra ny Holocene (Arivotaona fahaefatra BC). Ny tena malaza dia ireo any amin'ny faritry Niola doa, misolo tena ny vehivavy hatramin'ny roa metatra ny halavany.
Massif an'i Ahaggar
The Ahaggar massif
Mifindra atsimo izahay izao Alzeria hitsidika iray amin'ireo toerana manaitra indrindra ao Sahara. Io no massif be tendrombohitra any Ahaggar na an-trano. Na eo aza ny haavony, ny toetrandro any amin'ity faritra ity dia tsy dia matevina kokoa noho ny any amin'ny toerana hafa any an'efitra, ka izany no antony itsidihan'ny mpizahatany maro azy.
Rehefa nandeha ny fotoana, ny fikaohon-tany dia nanome endrika an'ireto tendrombohitra ireto izay manome ny tontolo a endrika misitery. Raha ampiantsika izany rehetra izany dia tanin'ny imuhagh, iray amin'ireo tanàna Toaregy izay monina ao Sahara, hamita ny famonosana ity toerana ity amin'ny majika isika.
Ny tanàna manan-danja indrindra amin'ity faritra ity, izay ialan'ny fitsangatsanganana fizahan-tany Tamanrasset. Raha te hahalala tanàna naorina manodidina ny farihy marina ianao, ity no alehanao. Ankoatr'izay, manana tranombakoka kely misy prehistory ary iray hafa momba ny jeolojia. Fa malaza kokoa io satria natsangana ny frantsay tao charles de foucauld, mpikaroka ary mystika an'ny antso "Fanahin'ny tany efitra".
Ny lohasaha Mzab
Tsy nandao an'i Algeria izahay mba hihaona amin'ny zava-mahatalanjona hafa ao Sahara: nambaran'ny lohasaha Mzab Lova eran-tany. Izy io dia lemaka feno vatolampy ampitan'ny lohasaha izay misy ny renirano mitovy anarana aminy.
Io no onenan'i ankizivavy, vondrona foko Berber izay nozarain'ny tanàna kely misy mànda, izay natsangana teo amin'ny iray amin'ireo havoana ao amin'ilay faritra. Anisan'ireny toerana ireny i Beni Isguen, izay nanomboka ny taonjato faha-XNUMX; Melika, Bounoura o Ny Ateuf. Fa ny tena zava-dehibe dia Ghardaia, anarana iray izay nomena ihany koa ny fitambaran-trano iray manontolo, miaraka amin'ireo arabe tery sy ireo tranony adobe kely.
Nouadhibou, fasana sambo ao amin'ny tany efitra Sahara
Na dia tsy manintona manokana aza izany, dia entinay mankany amin'ireo andalana ireo ny tanànan'i Nouadhibou satria itoeran'ny fasana sambo iray manontolo, zavatra mahagaga ao an'efitra. Na izany aza, dia hita eo amoron'ny Ranomasimbe Atlantika an'ny Maoritania, izay fihaonan'ny Sahara amin'ny ranomasina.
Nianjera tamin'ny krizy ara-toekarena lehibe ny governemanta, namela ny sambo manerana an'izao tontolo izao hajanona amoron-tsiraka. Ny valiny dia eo no ahitanao ny telonjato eo ho eo izay nanimba ny fotoana ary namorona a tena fahitana matoatoa.
Este ksar o tanàna mimanda Nanjary nalaza erak'izao tontolo izao i Maraokana noho ny loko maro loko izay ahariharin'ny masoandro amin'ny tranony adobe. Hahita izany fiara-fiara ianao mandritra ny ora vitsivitsy Marrakech amin'ny làlana taloha nataon'ny mpandeha rameva.
Toy izany ny hatsaran-tarehin'i Ait Ben Haddou izay nanambarana azy Lova eran-tany ary nanompo ho toerana ilain'ny maro Movies toa an'i 'Lawrence of Arabia', 'The Jewel of the Nile' na 'Alexander the Great' ary avy amin'ny andiam-pahitalavitra toy ny 'Game of Thrones'.
Erg Chebbi, ranomasina misy rahona
Any koa no misy Maraoka, ity ranomasina dongona ity dia mirefy folo kilometatra toradroa eo ho eo ary mahavariana ihany koa. Iray amin'ireo manintona malaza indrindra any an-toerana ny mitaingina rameva ary matory amin'ny jaimas tena izy.
Ireo zotra ireo dia miala amin'ny tanànan'ny Merzouga, izay mifanaraka tsara amin'ny fizahan-tany miaraka amina hotely maro. Ao aminy no ahitanao ny Famoriam-bahoaka Merzouga, izay ao anatin'ny fizaran-tany Dakar Series. Ary manana singular ihany aza angano momba ny dongom-peony. Milaza izany fa nateraky ny fahatezeran'Andriamanitra izy ireo rehefa nandà ny hanampy ny reny sy ny zanany ny mponin'i Merzouga. Nanaitra tafio-drivotra mahatsiravina avy eo ilay Andriamanitra izay namorona azy ireo. Ny mponina ao amin'ny faritra mbola mino ankehitriny fa maheno kiaka avy amin'ireo dongona ireo.
Tsy miala Maraoka, fitsidihana iray hafa amin'ny fidirana ao Sahara dia Ouarzazate na Uarzazat, araka ny ahafantarana azy «Ny vavahadin'ny efitra». Eo am-pototry ny atlas tendrombohitra ary eo akaikin'ilay antsoina hoe Oasis atsimo.
Atlas marina no antsoina hoe fandalinana horonantsary Inona no ao an-tanàna. Raha efa niresaka taminao momba an'i Ait Ben Haddou teo aloha izahay ho toerana filalaovana sarimihetsika samihafa, dia noho ny fisian'ireo seta ireo, izay manodidina ny roapolo hekitara no nahatonga an'i Urzazat renivohitr'i Maraoka.
Kashba an'ny Taourirt any Ouarzazate
Saingy betsaka ny zavatra azo atolotra anao ny tanàna. Ho an'ny vao manomboka, voatahiry tsara sy voatahiry tsara trano mimanda an'i Taourit. Dia a kashbah na tranoben'ny fiaviany Berber izay ao afovoan-tanàna ary, tamin'ny androny, no fonenan'ny Pasha an'ny Marrakech. Matetika izy io dia ampitahaina amin'ny lapa mimanda goavambe eny amoron-dranomasina. Ary sary marina izy io satria ny rindriny adobe sy ny tilikambony goavambe eo afovoan'ny haben'ny tany efitra dia manome azy io lafiny io.
Ny Fezzan, ny faritra Libya any amin'ny tany efitra Sahara
Ny faritr'i Fezzan angamba no ampahany mahavariana indrindra amin'ny Libya Sahara. Sehatra malalaka izy io izay ampifangaroina amin'ny tendrombohitra sy lohasaha maina ny efitra, fa ambonin'izany rehetra izany dia misy oasis iray mamela ny fiainana ny olona noforonina manodidina azy.
Ity faritry ny Sahara ity dia manome anao sary miavaka mahavariana toy ilay vava volkanika ao Waw-an-Namus, ny refesina misy azy fa misy oasis sy farihy telo artifisialy no hanome anao hevitra. Ny ranomasina fasika an'ny Murzuq, miaraka amin'ireo dongom-boaloboka mametraka azy; ireo mampiavaka Tendrombohitra Akakus, miaraka amin'ny endrik'izy ireo hafahafa, na ireo hazo rofia sy bararata miorina amin'ny sisin'ny lagoon masira an'ny Omm-al-Maa, vestige an'ny taloha farihy megafezzan izay lehibe toa an'i Angletera.
Etsy ankilany, ny tanàna manan-danja indrindra amin'ity faritra ity dia Sabha, tanàna oasis misy mponina iray hetsy izay nahalehibe an'i Muhamad el Gaddafi, mpitarika ny Libya taloha. Fa misy hafa kely kokoa toa Ghat, Murzuq o gadhamis.
Mount Uweinat, hieroglyphs miafina
Ny Uweinat massif dia zaraina Ejipta, Libya tenany ary Sodana. Izy io dia voahodidin'ny tany efitra Sahara, nefa koa misy oasy mahavokatra toa an'ireo Bahariya o Farafra. Ny faritra dia andriamby mahery ho an'ny mpandeha an-tongotra izay tia traikefa nahafinaritra.
Mitoby ao amin'ny El Fezzan
Fa, ambonin'izany rehetra izany, dia miavaka izy io satria amin'ny lemaka Gilf kebir sary sokitra hita teny amin'ny vatolampy ary hieroglyphs tena antitra izay maneho ny karazam-biby rehetra. Hitan'ilay mpikaroka tany egypta izy ireo Ahmed Hassanein Pasha tamin'ny taona 1923. Nandeha efapolo kilometatra io faritra io io iray io, saingy tsy afaka tonga hatramin'ny farany ka azo inoana fa mbola betsaka kokoa.
Ary farany, amin'ity faritra ity dia mahavariana izy io Kawahin'i Kebira, izay no vokatry ny fiantraikan'ny meteorite iray nitranga tokony ho dimam-polo taona lasa izay ary manarona faritra goavambe misy kilometatra dimanjato sy efatra hetsy.
Rahoviana no tsara kokoa ny mankany amin'ny tany efitra Sahara
Araka ny eritreretinao azy dia nanao izany ny Sahara iray amin'ireo toetr'andro mafy indrindra eto an-tany. Marina fa ny velaran-tany midadasika toy izany dia manana, fanerena, hanolotra toetrandro samy hafa. Saingy, saika ny tsy fisian'ny orana sy ny hafanana tafahoatra, izay mety hahatratra dimy amby dimampolo degre Celsius, dia mahazatra azy rehetra.
Raha ny marina, amin'ny fitsangatsanganana amin'ny lohataona sy fahavaratra dia amin'ny filentehan'ny masoandro ihany no atao. Noho izany, ny fotoana tsara indrindra handehanana any Sahara dia fararano sy ririnina, manokana kokoa ny volana izay manomboka amin'ny Novambra ka hatramin'ny Febroary.
Ary, ho an'ny fitsangatsanganana dia tokony hisafidy ny VOALAMINA. Tsy afaka miditra ao amin'ity fasika ity ianao raha tsy a mpitari-dalana mahay satria tandindomin-doza ny ainao.
Faritra iray any amin'ny tany efitra Sahara
Ahoana ny fomba hahatongavana any Sahara
Tsy afaka manolotra fomba tokana hankanesana an'ity tany efitra be ity izahay. Ny antony dia afaka manatona azy amin'ny firenena samihafa ianao. Na izany aza, ny zavatra mahazatra dia izany manidina any amin'ny tanàna akaiky ianao ary avy eo manakarama, araka ny efa nolazainay, ny sasany fitsidihana voalamina.
Ohatra, raha te-hitsidika an'i Sahara maraokana ianao dia afaka manidina any amin'ny tanàna toa azy Marrakech ary, rehefa tonga any, dia mitady fitsangatsanganana. Na izany aza, misy sampan-draharaha manokana manolotra anao ny fonosan'ny dia manontolo alohan'ny handehananao.
Ho famaranana, ny tany efitra Sahara dia ny lehibe indrindra eto an-tany amin'ireo mafana. Manarona firenena maromaro izy ary manolotra anao zava-mahatalanjona voajanahary, tanàna manonofy eo am-pototry ny oasis ary ny soratra miafina amin'ny vatony izay miverina hatramin'ny zavona taloha. Sahy mahalala izany colossus an'ny planetantsika izany ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Tany efitra Sahara